DHIBBO DHEJIS AH OO LOOGU TALAGALAY BISADAHA: TILMAAMAHA LOOGU ISTICMAALO IN LAGU DILO BOODADA IYO SHILINTA - GURI, GURI
Shilinta iyo boodada ayaa ah kuwa halista ah ee cudurada oo keeni kara saameyn aan dib-u-dhac ku jirin jirka bini-aadamka.
Wax khatar ah kuma laha nolosha xayawaanka. Si aad uga ilaaliso bisadkaaga qaniinka qaniinyada iyo caabuqa cudurka, waxaad isticmaali kartaa daawooyin ammaan ah.
Daawada Leopard waxay ilaalinaysaa xayawaan waxayna dadka u oggolaaneysaa inaysan ka baqin inay keenaan cayayaanka waxyeello u geysta guriga.
Leopard foomka la sii daayo
Si aad u tirtirto shilinta iyo boodada, waxaad isticmaali kartaa mid ka mid ah qalabyada lagu soo bandhigay qaybta. Wixii ku habboon ee milkiilayaasha caanaha, soo-saaraha soo saaro daroogada foomka shaambo, buufin, dhibcood iyo dabka.
Halabuurka oo dhan waxaa ka mid ah Fipronil, taas oo saameyn xun ku leh jidhka dulin, iyaga oo sumoobaya oo sababa curyaan. Maaddaama dareenka dareen-celinta aan la heli karin signalka, ma aha oo kaliya shaqada mashiinka, laakiin sidoo kale waxqabadka nolosha-nolosha ayaa xiran.
Waa muhiim !!! Marka loo eego macaamiisha, dhammaan waxyaabaha, Leopard waxay u qalantaa dareenka ugu badan. Waxay yihiin kuwa ugu wax ku ool ah oo sahlan in la isticmaalo.
Isticmaalka qulqulaha xajka
Si taxaddar leh uga saar sheyga.
Ku rid xayawaanka xayawaanka, ka dibna hagaajin.
Dhererka xad-dhaafka ah ayaa si qunyar ah loo jarjarey maqas si markaas bisadu si fudud u dhaqaaqdo.
Waa muhiim in ay jirto farqi u dhexeeysa ugu yaraan hal mitir oo u dhexeeya qoorta iyo qoorta si loogu sahlo xayawaanka.
Haddii xayawaankaaga uu si culus ugu dhaco boodada ama shilinta, waxaa habboon in laga hortago shaamboo laga soo qaado taxanahaas.. Labada maalmood ee ugu horreeya xayawaanku weli waa la weerari karaa shilinta iyo boodhka, hase yeeshee ma yeelan karaan waxyeello halis ah. Xitaa haddii naas-nuujinta maalinba, cayayaanka ayaa baabi'i doona iyada oo aan la helin gargaar.
Waa muhiim !!! Xaaladna maaha in xayawaanka la saaro xayawaan jiran kuwaas oo dhalaya caruur ama ay ku jiraan marxaladda dhicisoobida cudur kasta. Sidoo kale waa mamnuuc inaad isticmaasho qalabka loogu talagalay daaweynta kediska ee da'doodu tahay sideed usbuuc.
Shampoo sidoo kale waxay ka caawisaa in laga saaro dhammaan dulinka iyo cayayaanka dhogorta iyo maqaarka bisadaha. Tani:
marka hore, timaha xayawaanka ayaa si qoyan leh u qooyay biyaha si shaambadu u fududaan karto xumbo;
ka dib, hal ml oo jirka ah ayaa la qaadaa laba malyuun oo shaambo oo lagu xardhay maqaarka iyo timaha dhaqdhaqaaqa jilicsan;
codsigaa ka dib, waxaa lagama maarmaan ah in la sugo 3 daqiiqo si loo gaaro saameyn daaweyn ah oo si fiican u maydhin badeecada biyo diirran;
oo leh infekshin xoog leh, shaambo ayaa la mariyaa laba jeer;
Si loo gaaro saameynta la rabo waxay u baahan tahay hal ama laba habraac.
Waa muhiim !!! Marka la isticmaalayo shaambo, ma jiraan wax khilaaf ah. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu daweeyo carruurta yar yar iyo bisadaha hore ee waaweyn.
Barafyada Barafka: tilmaamaha isticmaalka
Foomkan, daroogada waxaa la mariyaa mar marka maqaarka cufan.
Wixii bisadaha Qeyb ka mid ah qoorta ayaa lagu doortaa saldhigga hoose ee dharka iyo meelaha u dhexeeya garabka garabka.
Tan iyo dhibcaha waxaa lagu soo saaray qaab ah ee dhibic yar caag ah ee 1 ml, waxaa lagama maarmaan ah in si taxadar leh loo qaato daroogada miiska miiska.
Miisaanka miisaanka Qiyaasta Pipette
Laga bilaabo 0 ilaa 1 kg 10 dhibcood 0.3 ml
1 ilaa 3 kg 20 dhibcood 0.6 ml
Laga soo bilaabo 3 kg Qadarka oo dhan 1 ml
Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in loo baahdo muddada labada daaweyn ah, haddii dadku ay yihiin kuwo aad u ballaaran oo ay saameynayaan xayawaanka kale ee ku nool guriga. Xaaladahaas oo kale, waa inaad marka hore la tashatid dhakhtar xoolaad ah oo ku saabsan suurtogalnimada dib u isticmaalida.
Waa muhiim !!! Ka hor inta aan la isticmaalin dhibcaha, xayawaanka waa in aan la mayrin 72 saacadood ka hor hababka iyo 72 saacadood ka dib. Tani waxay lagama maarmaan u tahay in si ka sii fiican loo nuugo walxaha dawooyinka iyo saameynta ku leh jirka bisada.
Dhibaatooyinka ka imanaya isticmaalka dhaqaalaha
Iyadoo si adag loo ilaaliyo tilmaamaha iyo iska horimaadyada, isticmaalka dhammaan hababka Leopard khatar ma keenaan wax calaamado ah.. Xaalado dhif ah, bisadku waxay noqon kartaa mid culus oo ku xiran qaybaha daroogada iyo walxaha firfircoon Fipronil.
Xaaladaha noocaas ah, firiiricyo ayaa laga yaabaa inay muuqdaan jidhka xayawaanka, bisadu waxay noqon doontaa mid degan mana isku dayi doonto inay isku xoqdo. Si aad u caawiso xayawaankaaga ku filan si aad u dhaqdo jaakad biyo leh diirimaad iyo daawo antiallergic.
Waa muhiim !!! Markaad isticmaashid mid ka mid ah macnaha Cuntooyinka waa inay si fiican ugu dhaqaan gacmahaaga saabuun iyo biyo si aad uga fogaato in ay ka soo baxdo walaxda firfircoon jirka.
Haddii aad dhab ahaantii daryeesho, saaxiibkaaga ka ilaali khatarta. Haddii aad aragtid waxyaabo xun oo ah isticmaalka daroogada, hubi inaad la tashatid dhakhtarkaaga.